Shan nooc oo taleefan ah ayaa ah kuwa ugu iibsiga badan-dhamaadka | Androidsis
Shan nooc ayaa xukuma suuqa sare
Suuqa casriga ah ee casriga ah ayaa si weyn u soo kordhay sanadihii la soo dhaafay. Dad badan oo isticmaala ayaa raadinaya inay iibsadaan tayada ugu sareysa ama taleefannada ugu casrisan uguna jaban suuqa. Markaa waxay aadaan qaybta caymiska. Qayb ka mid ah taas oo tartanku uu sidoo kale kordhay. In kasta oo kiiskan ay jiraan shan magac oo xukuma.
Magacyada qaar ka mid ah lama yaabi doono, maxaa yeelay waxay horeyba u ahaayeen kuwo fasal ah qaybtan ka mid ah meelaha sare. Tani waa kiiska Apple ama Samsung, oo ah labada ugu dheer qaybtan. Laakiin mid ka mid ah magacyada ka mid ah shantaan ayaa layaab ku noqon kara, waa kiiska OnePlus.
Gaar ahaan, shanta nooc ee ugu muhiimsan ee heerkan sare maanta waa: Apple, Samsung, Huawei, OPPO iyo OnePlus. Astaamaha Mareykanka ayaa sii wadaya inay xukumaan qaybtaan, qayb ahaan maxaa yeelay taleefannadooda kala duwan oo dhan ayaa ku dhex jira. Laakiin xoogaa xoog ayey suuqa ka lumineysay.
Apple waxay qaadataa 51% saamiga suuqa qaybtan. Samsung ayaa ku jirta kaalinta labaad iyadoo leh 22%, halka Huawei uu sii wado inuu ku hormariyo moodooyinka qiimaha leh, isagoo durba helay 10% saamiga suuqa. OPPO waa summad kale oo waddo dheer soo martay, waxaana loo daayay 6% halka OnePlus mar hore lagu xiray 2%.
Waa liis xiiso leh, laakiin waxay muujineysaa sida astaamahan ay u yaqaanaan sida loo qaybiyo qaybtan dhamaadka heerka sare. Apple iyo Samsung waa laba halyeey oo horeba. Huawei waa sumad laba sano oo horumar weyn leh, oo leh iib aad u wanaagsan qaybtan. Halka OPPO iyo OnePlus ay aad u korayaan sidoo kale suuqa caalamiga ah, kaas oo ka caawiya joogitaan badan.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii shantan magac maareeyaan inaad ku sii jirtid tan sare ee noocyada ugu iibinta badan dhamaadka sare. Maaddaama tartanku sii kordhayo. Marka waa inay sida ugu fiican uga dhigaan buug-yarahooda si ay uga dhaadhiciyaan macaamiisha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Shan nooc ayaa xukuma suuqa sare
Iibka Huawei wuxuu kordhay 50% rubucii koowaad